Ngabe useqala ukucikeka wukubhacaza kwePirates uZinnbauer? - Impempe
Ngabe useqala ukucikeka wukubhacaza kwePirates uZinnbauer?
Umqeqeshi we-Orlando Pirates, uJosef Zinnbauer obukeka ephelelwe wumdlandla
Ubukeke engenamdlandla futhi enengekile umqeqeshi we-Orlando Pirates, uJosef Zinnbauer ngemuva komdlalo wezakhe noThongathi FC kwiNedbank Cup ngoMgqibelo.
IPirates iye kulo mdlalo ivele ingekho egiyeni kodwa bekunethemba lokuthi izosebenzisa ithuba lokudlala neqembu elincane futhi elingekho ezingeni layo ukukhombisa ubungozi bayo.
Kodwa yize umdlalo ubungayisindi ayizange ikhombise ubukhulu bayo njengoba iwine ngengciciyela yegoli elilodwa, nalo elize langena ngesiwombe sesibili.
“Kuhlale kunjalo (uma nidlala neqembu elincane). Ngicabanga ukuthi kuhambisana nokusebenza kwengqondo, bathathe ngokuthi badlala neqembu lesigaba esingaphansi kwesabo,” kuchaza uZinnbauer ngezinga eliphansi elikhonjiswe yiBucs kulo mdlalo.
“Ukuzimisela bekwehlile… Uma ungumdlali uyakuqonda lokhu kodwa uma ungumqeqeshi akuzwakali kahle. Kodwa ke yizinto zakhona ebholeni lezi.
“Uma ungasheshi ushaye igoli, kuyaye kuye ngokuba nzima ngokuqhubeka komdlalo ngoba kunika enidlala nabo ithemba nomfutho.
“Angazi kwenzekeni, kodwa okubalulekile wukuthi sidlulele emzuliswaneni olandelayo. Yilokho vele ebesikufuna,” kuchaza lo mqeqeshi odabuka eGermany.
Mhlawumbe emdlalweni olandelayo weKe Yona iBucs izolenyusa izinga kwazise izobe seyibona lapho kuyiwa khona ngale ndebe. Ebuzwa ngalokhu, uZinnbauer akakhombisanga mdlandla.
“Ngithemba kanjalo. Ngithemba ukuthi abadlali bazizwa kanjalo. Kodwa okwamanje sekumele sibheke kuphela umdlalo olandelayo esizobhekana kuwo ne(Cape Town) City ngoLwesibili.
“Sizobona uma sekuqhathwa ukuthi sithola bani emzuliswaneni wesibili kodwa lokho sizogxila kukho uma sekuyisikhathi sakho. Okwamanje sibheke kwiCity emva kwayo wumdlalo weCAF (Confederations Cup). Imidlalo miningi elandelayo futhi iyona okumele sigxile kuyo manje.”
Previous Previous post: Uyanconcoza uMcCarthy ngoMemela noMajoro abangene benza izimanga
Next Next post: UNgcobo noMashiane sebefisa ukuzwa ubumnandi bokuwina indebe kwiChiefs